FAQ - mpankafy Kale
Inona ny HVLS FAN?
Ny mpankafy KALE avo lenta avo lenta (HVLS) dia karazana fantson-drano mekanika mihoatra ny 7 metatra (2,1 m) ny savaivony. Ny mpankafy KALE HVLS dia mpankafy valin-drihana amin'ny ankapobeny na dia misy tsato-kazo aza ny sasany. Mihetsiketsika moramora ny mpankafy HVLS ary mizara rivotra be dia be amin'ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana ambany– noho izany ny anarana hoe "haingam-pandeha ambony, hafainganam-pandeha ambany."
Ny fampiharana mahazatra ho an'ny mpankafy HVLS dia mizara ho sokajy roa - indostrialy sy ara-barotra. Amin'ny fampiharana indostrialy, ny HVACR dia matetika lafo vidy na tsy azo ampiharina, ary matetika ampiasaina amin'ny trano fanatobiana vata fampangatsiahana na fanamboarana sakafo mangatsiaka na mangatsiaka. Ny mpankafy apetraka amin'ny habaka toy ny trano fanatobiana entana, trano fitehirizam-bokatra, hangars ary ivon-toeram-pizarana dia afaka misoroka ny fihenjanana amin'ny hafanana, mampitombo ny fampiononana ny mpiasa ary ny vokatra ho an'ny mpiasa sy ny biby fiompy.
Ny mpankafy KALE HVLS dia ampiasaina amin'ny sehatra ara-barotra ihany koa, izay fahita matetika kokoa ny rivotra, fa ny fiakaran'ny rivotra avy amin'ny mpankafy valin-drihana dia mety hampitombo ny fampiononana na hisorohana ny stratification. Ny fampiharana ara-barotra mahazatra dia ahitana toeram-pivarotana, fiangonana, trano birao, tranoben'ny seranam-piaramanidina, toeram-pitsaboana ary sekoly.
Ahoana ny fiasan'ny KALE HVLS FANS
Ny mpankafy HVLS dia miasa amin'ny foto-kevitra hoe ny rivotra mangatsiaka mangatsiaka dia manapaka ny sisin-tany feno hamandoana manodidina ny vatana ary manafaingana ny etona mba hamokatra vokatra mangatsiaka. Ny fantson-drivotra dia mamokatra tsanganana rivotra rehefa mihodina izy ireo. Mikisaka midina sy mivoaka manaraka ny tany ity andry rivotra ity. Antsoina hoe fiaramanidina marindrano io rindrina lalina amin'ny rivotra mitsivalana io dia mifandraika amin'ny savaivony ny mpankafy, ary amin'ny ambaratonga kely kokoa, ny hafainganam-pandehan'ny mpankafy. Raha vantany vao tonga amin'ny mety ho azony ilay fiaramanidina, dia mifindra monina any ivelany izy mandra-pifanenany amin'ny rindrina na rindrina mitsangana hafa.
Amin'ny toe-javatra tsara indrindra, ny fantson-drivotra 8 metatra (2,4 m) savaivony dia mamoaka rivotra eny amin'ny tany manodidina ny 36 santimetatra (910 mm) lalina. Ny fantson-drano 24 metatra (7,3 m) savaivony dia mamokatra fiaramanidina 108 santimetatra (2,700 mm) halaliny, ampy hahavonto olona mitsangana eo amin'ny tany na omby iray, ny tanjony voalohany amin'ny fampandrosoana.
Ny mpankafy HVLS ara-barotra dia tsy mitovy amin'ny mpankafy valindrihana ao an-trano raha ny savaivony, ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana ary ny fampisehoana. Raha misy mpankafy mampiasa lelany amin'izao fotoana izao mba hamindra rivotra, dia misy fomba hafa ampiasaina mba hahomby kokoa toy ny fampiasana airfoils.
Izahay KALE FANS dia mifantoka amin'ireo mpankafy valindrihana HVLS lehibe miaraka amin'ny R&D mihoatra ny 11 taona ary manantena izahay fa ho tonga mpamatsy marina anao amin'ny serivisy avo lenta sy tsara indrindra, antsipiriany bebe kokoa ary fanontaniana, azafady mifandraisa aminay malalaka.
Iza amin'ireo mpankafy valindrihana no tsara kokoa
Ny mpankafy valin-drihana indostrialy lehibe dia tsy tokony hihaino fotsiny ny vidiny. Raha ny marina, ny rafitra, ny faritra, ny haavony, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fitsitsiana angovo ao amin'ny orinasa no antony lehibe indrindra amin'ny fisafidianana mpankafy indostrialy lehibe. Mila jerena ihany koa ny fampiasana azy ireo miaraka amin'ny rivotra sy ny fantson-tafo.
Ohatra, ny tanjona lehibe amin'ny fampiasana mpankafy indostrialy lehibe any amin'ny orinasa dia ny fampidinana rivotra sy mangatsiaka. Noho izany, ny fifantohana amin'ny vokatra haingana kokoa, ny singa vokatra dia manana fanoherana harafesina tsara, ary ny rafitra fanaraha-maso ny rivotra. Ho an'ny habaka misy fepetra avo lenta amin'ny fotoana fandehanana mitohy, dia tokony hampiasaina ny motera mitambatra nafarana tany am-boalohany, na ny mpankafy indostrialy lehibe misy boaty dia tokony hofoanana, ary ny hafainganam-pandeha dia tokony hofehezina ao anatin'ny faritra iray, ary malefaka ny tanana. Amin'izao fotoana izao, ny indostria ao an-toerana dia manana fahamarinan-toerana tsara, ary vitsy ny mpankafy indostrialy lehibe manana marika fanta-daza. Mifampitaha ny sasany. Noho izany dia tsy maintsy mitandrina ianao rehefa misafidy ary aza variana amin'ny fampielezan-kevitry ny mpanamboatra.
Ny vidiny matetika no antony faharoa manan-danja indrindra izay tsy maintsy heverin'ny mpanjifa rehefa mividy mpankafy indostrialy lehibe, saingy mety ho tsy fifankahazoana lehibe izany. Ny vidiny ambany dia tsy midika hoe mandany vola kely kokoa. Alao sary an-tsaina fotsiny, raha mila manamboatra mpankafy indostrialy lehibe sy mora ianao ao anatin'ny fotoana fohy, ny tena vidiny dia mety ho ambony noho ny an'ny mpanamboatra malaza. Ankoatr'izay, ilaina ny miantoka fa ny mpankafy indostrialy lehibe voafantina dia mora ny mitazona amin'ny fotoana manaraka ary azo antoka ny serivisy azo antoka mandritra ny vanim-potoana fiantohana.
Ho an'ny mpankafy valindrihana indostrialy lehibe dia azonao atao ny misafidy KALE FANS. Ny mpankafy mitsitsy angovo indostrialy an'i KALE dia mampiasa motera novolavolaina manokana sy nohavaozina avy any Alemaina. Izy io dia manana lelany valo miaraka amin'ny torque lehibe, ary ny fiarovana ny singa rehetra enta-mavesatra> 5. Ny famolavolana sy ny fifantenana ara-pitaovana ny singa enta-mavesatra static dia mifototra amin'ny fiainana lava be.